ဒါနပြုရာမှာမဂ္ဂင်ရှစ်ပါးပါသလား	အမေး။ ။ ဘုန်းဘုန်းဘုရား မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးကို အကျဉ်းခြုံးလိုက်ရင် သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာလို့ တပည့်တော် သိထားပါတယ်ဘုရား။ ဒါဖြင့် မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးထဲမှာ ဒါန မပါဘူး ဖြစ်နေပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်သိချင်တာက ဒါနဟာ မဂ္ဂင်ရှစ်ပါးထဲပါမပါ သိချင်ပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တွေးသလို တချို့လည်း တွေးမိကြလိမ့်မယ် ထင်တယ်ဘုရား၊ ဒါကြောင့် အားလုံး သိအောင် ဖြေကြားပေးစေချင်ပါတယ်ဘုရား။
This entry was posted on October 22, 2011 by Noble Kyaw. It was filed under ဓမ္မအတွေး၊ဓမ္မအမေး .	→